चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्यो शुल्क निर्धारण, स्नातकोत्तर पढ्न कुन विषयमा कति लाग्छ ? « Image Khabar
चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्यो शुल्क निर्धारण, स्नातकोत्तर पढ्न कुन विषयमा कति लाग्छ ?
२८ पुष २०७७, मंगलवार ०८:४२
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातकोत्तर तहको शुल्क निर्धारण गरेको छ । एमडी र एमएस क्लिनिकल र एमडीएस क्लिनिकल अध्ययन गर्न २२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
यसैगरी एमडी र एमएस बेसिक साइन्स (ननक्लिनिकल) र एमडीएस नन क्लिनिकल अध्ययन गर्न १० लाख ४८ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । एमडी आयुर्वेद पढ्न ९ लाख २४ हजार ३ सय ६५, एमएन र एमएस्सी नर्सिङका लागि ८ लाख ८८ हजार २ सय ५०, एमपीएचका लागि पनि ८ लाख ८८ हजार २ सय ५० र एमफर्माका लागि ५ लाख १ हजार ६ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।
एम एस्सी एम.एल.टी, एम.एस्सी एम.आई.टी, एम.एस्सी मेडिकल माइक्रोबायोलोजी.र.बायोकेमेस्ट्री र एम.एस्सी बेसिक साइन्स अध्ययन गर्न समान ७ लाख ३१ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । एमफिल क्लिनिकल साइकोलोजीका लागि भने २ लाख ९३ हजार ६४५ रुपैयाँ तोकिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगले जनाएको छ ।
एमएस्सीचिकित्सा शिक्षा आयोगशुल्क निर्धारण
स्याङ्जाको गल्याङ अस्पताल एक हप्ताका लागि सबै सेवा बन्द हुने
स्याङ्जा । अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी कोरोना संक्रमित भएपछि स्याङ्जाको गल्याङ नगर अस्पतालमा अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरिएको छ । अस्पताल प्रशासनले एक सूचना